ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဗျို့ Doomsday | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ကမ္ဘာကြီးပျက်တော့မယ်ဗျို့ Doomsday
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 25, 2010 in Community & Society, Events/Fundraise, World News | 19 comments
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မယ်ဗျို့။ မပြောမရှိ မတီးမမြည်ဆိုသလို ရွာသူရွာသားများ အားလုံးအတွက် စိတ်ပူလို့ ကျနော်တယောက်ထဲ လျှိုမထားဘဲ လွတ်မြောက်ဖို့ သိထားတာတွေကို ဘာသာပြန် ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ မှီငြမ်းကိုးကားတဲ့ ဆိုက်ကတော့ http://www.just2012.com/2012-doomsday-escape-plans-for-poor-people/ ဘာသာပြန် အပြည့်အစုံကတော့ အောက်မှာပါ။
“ဆင်းရဲသူတွေ အတွက်ကတော့ ကမ္ဘာပျက်မဲ့နေ့ကနေ လွတ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုကောင်းပါတယ်”
သဘာဝဘေး အန္တရယ်ကပ်ဆိုးကြီးတွေ၊ သေမင်းတမန် ငလျင်ဘေးဒဏ်တွေကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ထိခိုက်သေဆုံးမှု ကိန်းဂဏန်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာ ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရောကြီးတာလဲ အပါဝင်ပေါ့နော်။ ကျေးလက်တောရွာဒေသတွေမှာ နေလေ့ရှိသူတွေကတော့ ဘယ်လို လွတ်အောင်ပြေးရမယ်ဆိုတာ နဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကနေ လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းတွေကို သိကြပါတယ်။ ဆင်းရဲရတာရဲ့ အားသာချက်တခုပါပဲ။ ချမ်းသာသူနဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးပျက်ဆီးမဲ့နေ့ ရောက်ရင် ပိုပင်ပန်းဆင်းရဲ ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကမ္ဘာပျက်ခဲ့ရင် သို့မဟုတ် သဘာဝ ကပ်ဆိုးတခုခုများ ကျရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆောင်ထားကြဖို့ ပစ္စည်းစာရင်းတခုကို ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ သစ်သား၊ အဝတ်အထည်များနဲ့ လှေကောင်းကောင်းတွေကို သင့်ရဲ့နေရာ အနီးမှာ ဆောက်လုပ်ပါ။ လှေတွေဆောက်တဲ့အခါ အနီးအနား လူများလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။
၂. ဖယောင်းတိုင် အများအပြားကို ဝယ်ယူထားရှိပါ။ လျှပ်စစ်မီး ဘယ်အချိန်ပျက်သွားမလဲဆိုတာ မသိနိုင်လို့ ဖယောင်းတိုင်ဟာ သင့်အိမ်မှာ အမြဲရှိရပါမယ်။ ဒီဖယောင်းတိုင်တွေဟာ အရမ်းမှောမဲပြီး အေးခဲနေတဲ့ ညတွေအတွက် အသက်ကယ်ပေးမဲ့ နည်းလမ်းတခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၃. ဖယောင်းတိုင် သို့မဟုတ် မီးတိုင်လုပ်လို့နိုင်တဲ့ အပင်တွေနဲ့ ငါးမျိုးစိတ်တွေကို လေ့လာထားပါ။
၄. အဝတ်အထည်အဖြစ် ဖန်တီးလို့ရမဲ့ အရာတွေနဲ့ အပင်တွေကို အသုံးချဖို့ လေ့လာပါ။
၅. သင်ဘယ်ကို ဦးတည်သွားနေသလဲ ဆိုတာသိဖို့ ဒေသမြေပုံကိုဆောင်ထားပါ။
၆. မြေပုံနဲ့တွဲသုံးဖို့ သံလိုက်အိမ်မြှောင် ဆောင်ထားဖို့လည်း စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
၇. သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ကြောင့် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ရင် ဆက်လက် လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ ရေဒီယိုလှိုင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက် မိမိရပ်ကွက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါ။
၈. နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ကိရိယာတွေကိ လေ့လာထားပါ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်နဲက နှစ်ပေါင်းများစွာ အားသွင်းလို့ရတဲ့ ဘက်ထရီဓာတ်ခဲ များစွာရှိပါတယ်။
၉. သီးနှံပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုးဖို့ စားလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ အပင်မျိုးစေ့ တချို့ကို သိုလှောင်ပါ။
ကမ္ဘာကြီး ပျက်တော့မယ်ဆိုရင် သတိပြုရမှာက သင်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှင်ရန် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်တယ် ဆိုတာပါ။ တခြား အီလက်ထရွှန်နစ် မီးတိုင်များနဲ့ အခြားပစ္စည်းမျာ ကိုလည်း အထက်မှာပြောထားတဲ့ စာရင်းမှာ ထပ်ပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်။ (ဈေးချလို့ကတော့ ဆင်တောင်မချန်နဲ့ လိုရမယ်ရ အကုန်သာ ဝယ်ထားကြပါ)
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ သင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ လှေတွေနဲ့ ဘေးလွတ်ရာကို အလွယ်တကူ ရောက်နိုင်ဖို့ အစီအမံ ရှိထားဖို့ပါပဲ။
2012 Doomsday Escape Plans for Poor People
Accepting that you are poor, may brighten the chances of escaping doomsday.
If you takealook at the statistics about the casualties when deadly earthquakes or big events take place in the cities. It includes the floods as well. The people who are accustomed to living in rural areas know the tricks to escape and beat the destiny in its own game. Your status of being poor is an advantage. The rich and famous people will suffer more if doomsday occurs.
Here isalist of items which you must keep ready with you just in case doomsday or anything as natural calamity strikes you.
1.	Build good boats with generally available wood and material near your place. You may include the people of your community to build few of them.
2.	Buy Lots of candles and keep them with you. The wax candles must be in your home always. As you do not know when the electricity grid fails. Just in case of extreme cold and dark nights, these candles will becomeaway to save lives.
3.	Study the plants and fish species which can be used for making the candles or can burn as candle.
4.	Learn to use plants and create something to wear as clothes.
5.	Keep the area map with you so that you know where you are heading.
6.	To augment map, you can think of keeping compass as well.
7.	Try to work with community to setup radio service which can keep on working just in case the natural calamities have cut off the contact with other world outside.
8.	Learn to use Solar Powered equipments. There are many batteries which can be charged with Solar power can last of many years.
9.	Store some seeds of the normal edible plants which can be used for growing the crops.
You need to remember that if doomsday occurs, you need to plan for many years to survive. You may add more items to above list such as electric torches and other items.
And most important, keepaplan ready to move to the places which are safer and reachable easily with the help of the boats which you assembled.
မိုးပြိုမှာကိုတွေးကြောက်ပြီး ခြေထောက်ထောင်ပြီးအိပ်တဲ့ တစ်တီတူးလို ဖြစ်နေပြီ …
၀ုတ်ပါတယ် ၀ုတ်ပါတယ် ညောင် ..
၂၀၁၂ မရောက်ခင် အခုတည်းက ဂူပိတ် တရားကျင့်.. အဲ.. တခါးပိတ်အိပ်တာ မှ မသေခင် အိပ်ရေး၀၀ အိပ်ရအုန်းမယ်။
မိန်းမတစ်ယောက်လောက် ယူထားဦးမှပဲ – (ငှဲငှဲ)
ဒီတွက်တော့ ဘာမှမပူကြပါနဲ့ ခင်ဗျား
ဘာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှ မဖြစ်ဘဲ ကောင်းကောင်းဝန်ဆောင်မှု့ ပေးမယ့်
အစောင်လက်ဖွဲ့ ကို ကျွန်ုပ်မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုမှ တီထွင်ဖော်ထုပ်လိုက်ပါပြီ
ပွတ်လိုက်ရင်ပြောင် ဆောင်ထားရင်လေး ရေစိမ်သောက်ရင် ရှုရှုပေါက်ပြီး လွှင့်ပြစ်ရင် အဝေးကိုရောက်စေတဲ့
မိတ်အင်ဘားမား မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု အင်တာပရိုက်ကနေ မှုတ်ဆေးဘူးပေါင်းစုံတွင်းမှ
အမှန်အကန်ကောက်ယူစုစောင်း စီမံထားတာဖြစ်ပြီး အရေတွက် အကန့် သတ်ရှိပါသဖြင့်
တစ်လုံး အစိမ်းသုံးရွက် ခုနစ်လုံး အရွက်နှစ်ဆယ်
အရေတွက်အလိုက် အနည်းငယ် ဒစ်စကောင့်ချပေးမည်ဖြစ်ပါ၍
(ဂေဇက်ရွာသူ/သား(လိင်တူချစ်သူ)များ ဖြစ်ပါက ရွာသူကြီးထောက်ခံစာပါလျှင် တစ်လုံး ဆယ့်လေးဒေါ်လာနှင့် ခြောက်ဆင့် သီးသန့် လျှော့ပေါ့ပေးပါမည်)
ဓာတ်လုံးက လေးခွထဲ ထည့်ပစ်နိုင်သည့် အမျိုးအစားဖြစ်လျှင် လိုချင်ပါသည်။ 2012 မရောက်ခင် အသုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ တစ်လုံး အစိမ်းသုံးရွက် တန်ဖိုးအတွက် အစိမ်းရောင် အရွက်များများရအောင် လိုက်လံစုဆောင်းနေပါသည်။
ကြာရွက်၊ ပိန်းရွက်၊ ငှက်ပျောရွက် အစရှိသည့် အစိမ်းရွက်များဖြင့် မကြာမီလာဝယ်ပါမည်ဟု ကိုအောင်ပုကို သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါကြောင်း။
၂၀၁၂ မဟုတ်လား လိုပါသေးတယ် အေးဆေးပေါ့ ။
အင်းလေ ၂၀၁၂ က လိုသေးတယ်။
ဟိုတစ်ခုက ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၄ရက်နေ့တောင် သေရတော့မယ်ဆိုပဲ။
လူတွေ အားလုံးပျော်ကဲရွှင်ပွဲတောင် မတိုင်ခင် ၂လလောက်အလိုမှာ ပွဲသွင်းပေးလိုက်ဦးမယ်။ ကဲကြစမ်း။ ပြီးရင်သေကြရမှာပဲ။
ဝတ်လစ်စလစ်ပွဲ၊ သေသောက်ကြူးပွဲ၊ ဆေးမူးယစ်မှိန်းပွဲ….။
သေမယ် ဆို သေလိုက်ယုံဘဲ.. ဘာမှ နောက်ဆံ မတင်းဘူး.. မွေးတုန်းကလည်း တယောက်တည်း သေတော့လည်း အဖော်တောင် ပါသေးတယ်။
ငါသည် မုချ သေရမည် အချိန်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်။ မိုးကုတ် ဆရာတော် ဘုရားကြီးက အဲဒီ စာချိုး ပါးစပ်ထဲ အလွတ်ရစေချင်လို့ ရွတ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူး.. သေခြင်းတရားကို အချိန်မရွေး နှလုံးသွင်းနိုင်အောင် သတိမလွတ်အောင် နေခိုင်းတာ။
အဲ့လိုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းတော့မှာပေါ့ ..သူလည်းပင်ပန်းနေပြီလေ..ပေးနားလိုက်ကြပါတော့ ….အာသမ်နဲ့အေ၀ ပြန်ပေါ်လာမလားမသိဘူးနော်။စာရင်းပေးထားကြနော်….
Knowing ဇာက်ကားထဲကလို နောက်ထပ်ကမ္ဘာသစ်မြန်းရှိနေမလား မသိဘူးနော်
ကမ္ဘာပျက်တယ်ဆိုတာ .. ဘယ်လိုမျိုးလဲ ။ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ဖြစ်မှာလား?
စာရေးသူပြောသလိုသာ တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အခုမှ ၂၀၁၀ ပဲရှိသေးတာ ၂၀၁၂ ရောက်ဖို့က လိုပါသေးတယ်… ပြင်ဆင်ချိန်တော့ရှိတာပေါ့… တကယ် ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာက ကံပေါ့နော်… လူသားတွေအတွက်ကတော့ မဖြစ်ဖို့ဘဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပေါ့….
ကိုကြောင်ကြီး ရဲ့အာဘော (အဲလေ မွားလို့ ) အာဘော်အရ
ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူချင်သူများ ကို
ကျွန်ုပ် မစ်စတာပေ မှ အထူးဒစ်စကောင့် ဖြင့်
ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ..
သူများတွေသေရင်ငါလည်းသေချင်တယ် … တစ်ယောက်တည်းဆိုပျင်းစရာကြီး …….. ကျွန်တော်ရယ်ကောင်မလေးချောချောလှလှတောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် တစ်ယောက်ရယ်ဆိုတော်သေးတယ် …..အာဒမ်နဲ့ဧ၀တို့လို နှစ်ယောက်ထဲ ဘ၀စရမယ်ဆိုတော်သေးတယ် …………..